Firefox 88 dia miaraka amin'ny fanatsarana ho an'ny mpijery PDF, Linux, HTTP / 3 ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Firefox 88 dia miaraka amin'ny fanatsarana ho an'ny mpijery PDF, Linux, HTTP / 3 sy maro hafa
Andro vitsy lasa izay dia nambara ny fanombohana ny kinova Firefox 88 vaovao fanatsarana maromaro no vita tsy ho an'ny navigateur ihany, fa ny fanampiana lehibe ho an'ny Linux koa dia nampiana, ary koa ho an'ny protokol HTTP / 3 vaovao.
Ho fanampin'ny fanamboarana bibikely sy fanavaozana, Firefox 88 nametraka marefo 17, 9 amin'ireo no voamarika fa mampidi-doza, 5 marefo no ateraky ny olana amin'ny fitadidiana, toy ny fihoaran'ny buffer sy ny fidirana amin'ireo faritra tadidy efa navotsotra.
1 Vaovao lehibe ao amin'ny Firefox 88
2 Ahoana ny fametrahana ny kinova Firefox 88 amin'ny Linux?
Vaovao lehibe ao amin'ny Firefox 88
Fiovana iray hafa izay hitantsika ao amin'ny Firefox 88 dia ny fameperana vaovao amin'ny hamafin'ny fampisehoana ny fangatahana fahazoan-dàlana hiditra amin'ny microphone sy fakan-tsary. Ireo fangatahana ireo dia tsy haseho raha toa ka tao anatin'ny 50 segondra farany dia efa nanolotra fidirana amin'ny fitaovana iray ihany ny mpampiasa, ho an'ny tranokala iray ihany sy kiheba iray ihany.
Momba ny fanovana ho an'ny Linux, afaka mahita an'izany isika nanampy fanohanana ny scaling tontonana mikasika ny tontolo iainana mifototra amin'ny WaylandHo fanampin'izay, rehefa manomboka amin'ny tontolon'ny Xfce sy ny KDE ny Firefox, dia azo ampiasaina ny fampiasana ny motera famokarana WebRender.
Firefox 89 dia antenaina hampiditra WebRender ho an'ny mpampiasa Linux hafa rehetra, ao anatin'izany ny kinova Mesa rehetra sy ny rafitra misy mpamily NVIDIA (teo aloha, ny webRender dia natao ho an'ny GNOME miaraka amin'ireo mpamily Intel sy AMD fotsiny).
Etsy ankilany, misongadina izy ao amin'ny Firefox 88 Natomboka tamin'ny fampidirana ireo dingana amin'ny HTTP / 3 sy ny kaonty QUIC. Amin'ny voalohany, ny fanohanana ny HTTP / 3 dia hoentina ho an'ny mpampiasa kely fotsiny ary raha tsy misy ny olana tsy ampoizina dia ho azon'ny rehetra amin'ny faran'ny Mey izany.
Ny fanohanana FTP dia tsy mandeha amin'ny laoniny. Ny setting network.ftp.enabled dia napetraka ho diso amin'ny alàlan'ny default, ary ny setting extension extension browserSettings.ftpProtocolEnabled dia hapetraka amin'ny famakiana fotsiny. Ny kaody rehetra mifandraika amin'ny FTP dia hesorina amin'ny kinova manaraka.
Ny antony dia ny fihenan'ny loza ateraky ny fanafihana taloha, miaraka amin'ny tantaran'ny olana momba ny fahalemena sy ny fikojakojana, kaody miaraka amin'ny fampiharana FTP. Miresaka ihany koa ny fanesorana ireo protokol izay tsy manohana ny encryption, izay tsy voaro amin'ny fanovana sy ny fidiran'ny fifamoivoizana mandritra ny fanafihana MITM.
Ao amin'ny fitaovana fampivoarana tranonkala, ny tontonana fanaraha-maso ny tambajotra dia manana fifandimbiasana eo anelanelan'ny fanehoana valiny HTTP amin'ny endrika JSON sy tsy miova, izay ahitàna ny valiny nalefa tamin'ny tambajotra.
La fampidirana default ho fanohanana ny endrika sary AVIF (Endrika sary AV1), izay mampiasa teknolojia famatrarana intra-frame avy amin'ny endrika famadihana horonan-tsary AV1, dia nahemotra ho amin'ny famotsorana azy amin'ny ho avy. Firefox 89 koa dia mikasa ny hanolotra mpamatsy mpampiasa nohavaozina ary hampiditra calculatera ao amin'ny bara adiresy.
Ahoana ny fametrahana ny kinova Firefox 88 amin'ny Linux?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Firefox 88 dia miaraka amin'ny fanatsarana ho an'ny mpijery PDF, Linux, HTTP / 3 sy maro hafa
Miarahaba, mandeha tsara ho ahy izy, tonga lafatra, ny zavatra tsy tiako dia ny nanesorany ny ftp fa tsara raha ho fanatsarana.
FOS-P5: Fikarohana ny loharano misokatra misokatra sy mitombo ao amin'ny Facebook - Fizarana 5